Indlu etofotofo enegadi encinci enemithi
Indlu etofotofo enamagumbi ama-3 ibekwe kumgangatho ophantsi. Ukusetyenziswa ngasese, umgangatho ophantsi wendlu: igumbi lokuhlala elisondeleyo kunye neTV, ikhitshi enezixhobo, igumbi lokuhlambela labucala, amagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezibanzi zabantu aba-2. Ukukwazi ukuphumla kwigadi encinci, enemithi ene-barbecue, i-deckchair. Indawo yokupaka yasimahla phambi kwendlu.
Ukufikelela ngokupheleleyo kwizinto eziluncedo kumgangatho ophantsi wendlu. Ndikumgangatho woku-1.
Ubumelwane beLake kunye ne-promenade ekhanyisiweyo kunye nemithombo. Ukuba kufutshane kwesikwere sedolophu kunye neendawo zokutyela. 2 iicanteens zokupheka ezinencasa 300 m A marina ngasechibini 200 m, marina ngasemlanjeni 500 m. Concert iqokobhe 600 m. Egcinwe kakuhle Oscar Tietz Park ngebala lokudlala, gym yangaphandle 300 m. ibhayisekile indlela ejikeleze ichibi.
Ndiyavuya ukunika iingcebiso kunye noncedo malunga nokubona indawo kunye nokuphumla.